प्रादेशिक प्रयोगशालामा परीक्षण बन्द, तर कोरोना संक्रमित घटेको धाक ! – Health Post Nepal
२०७७ असार २६ गते ८:३९
केही दिन अघिसम्म प्रदेश २ मा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर उच्च थियो। प्रदेशभित्रका अधिकांश क्वारेन्टाइन भरिभराउ थिए, भने आइसोलेसनमा ठाउँ अभाव हुँदा संक्रमितलाई क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्ने बाध्यता थियो।
तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहस्थित अधिकांश क्वारेन्टाइन खाली भइसकेका छन्। आइसोलेसन बेडको खासै अभाव देखिएको छैन।
एक महिनाअघिसम्म उच्च रहेको संक्रमण दर अहिले ह्वात्तै घटेको छ। यसअघि दिनको २ सय ५० भन्दा बढी संक्रमण दर अहिले ७ देखि १५ सम्ममा झरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ मा हालसम्म ३ हजार ७ सय ६८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा २ हजार २ सय ८१ जना निको भइसकेका छन्। ५सय ३५ जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ।
यसैगरी ३१ हजार ७ सय ९१ जनाको क्षमता रहेको क्वारेन्टाइनमा अहिले जम्मा २ हजार ७ सय १८ जना बसिरहेका छन्। क्वारेन्टाइनभन्दा अहिले होम क्वारेन्टाइन बस्नेको संख्या बढी छ। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार होम क्वारेन्टाइनमा १९ हजार ९५ जना मानिस बसेका छन्।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रमुख विजय झा संक्रमणपश्चात निको भइसकेका र क्वारेन्टाइनमा बसेर कोरोना निगेटिभ रिपोर्ट आइसकेकाहरू घरभित्र रहेकोले होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या बढी देखिएको बताए।
झा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको देखिए पनि ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। ‘पछिल्लो केही दिनयता संक्रमणको दर घटेको छ, क्वारेन्टाइन पनि खाली भएका छन्,’ आयोमेलसँग कुरा गर्दै झाले भने, ‘तर अहिले नै ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था आइसकेको छैन। सावधानी अझै जरुरी छ।’
संक्रमणको दर घटेको देखिनुमा जाँचको दायरामा कमी आउनु प्रमुख कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। प्रदेशभित्र कोरोना परीक्षणमा कमी आएकोले संक्रमणको संख्यापनि कम देखिएको डा.अजय झा बताउँछन।
‘पछिल्लो पटक संक्रमितको संख्या घट्दै गएको देखिएको छ, वास्तवमै संक्रमित घटेको हो कि परीक्षणको दायरा ? यो बुझ्नु जरुरी छ,’ डा. झा थप्छन्,‘परीक्षण गर्दा पनि कोरोना देखिएन भने संक्रमण घटेको भन्न सकिन्छ। तर, यहाँ त परीक्षण नै भएको छैन। संक्रमण घटेको कसरी भन्न सकिन्छ।’
प्रदेश २ मा प्रादेशिक प्रयोगशालासहित वीरगंज र राजविराज अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गर्न पिसिआर जडान गरिएको छ। कर्मचारीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण प्रादेशिक प्रयोगशालामा परीक्षण बन्द भएको तीन दिन भइसकेको छ।
राजविराज र वीरगंज प्रयोगशालामा पनि परीक्षणको दायरा घटेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका एक कर्मचारीले बताए। परीक्षणका लागि चाहिने आवश्यक कीटको अभाव भएपछि स्वाब संकलनदेखि स्वाब जाँचको दायरामा कमी आएको ती कर्मचारीको भनाइ छ।
प्रदेश सरकार कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि अझै गम्भीर हुननसकेको बताउँछन्। उच्च जोखिममा रहेको प्रदेशभित्र जाँचको दायरा बढाउनतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘आइसोलेसनभित्र छट्पटिएर मानिस मरेको छ, सरकारले पाँच लाख मूल्य तोकिदिएको छ,’ उनी भन्छन्,‘थप जोखिम मोल नलिन जाँचको दायरा बढाउनु पर्दथ्यो हुनसकेको छैन्।’ जाँचको दायरा नबढ्दा संक्रमितको संख्या घटेको मात्रै देखिएको हो उनले बताए।